လျှင်မြန်သော ချေးငွေ လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် မိနစ် ၃၀ အတွင်း ချေးငွေရယူနိုင်ခြင်း ။
Fast loans from 35,000 - 700,000 MMK
ငွေချေးခြင်း။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း။ ပေးချေခြင်း။
LendmoMyanmar သည် အွန်လိုင်းငွေချေးမှု Company ဖြစ်ပါသည် ။.
ချေးငွေလိုအပ်နေသောမည်သူ့ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ဟာ အတိုးနှုန်းသက်သာသာနဲ့ချေးပေးနေပါတယ် ။. ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဟာတစ်နှစ်ကို ၁၂ ကနေ၂၀ % အတိုးနှုန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ .အချက်အလက်နဲ့ပိုက်ဆံတွေဟာစိတ်ချရပါတယ် ။ Lendmo Myanmar ဟာ ချေးငွေယူသူရဲ့ကိုယ်ရေးအချက် အလက် ၊ ချေးငွေယူခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ချေးငွေပြန်လည်အပ်နှံခြင်းအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
တစ်နှစ်အတွင်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးအမြတ်ရရန် မည်သို့ရင်းနှီး မြုပ်နှံမည်နည်း ။
ကျွန်တော်တို့ Customer တွေ ဘာပြောလဲ ။
U Than Htay - (Officer)
စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံက မလောက်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် အပြင်ကနေ ချေးငွေ ရယူချင်တယ်။ သို့ သော် အဲလိုချေးငှားဖို့ ရာ ချေးငွေ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ကျွန်တော့်ကို အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားစေတယ်။ကျွန်တော့်အချိန်တွေ အကျိုးရှိအောင် ကျွန်တော့်ကို ထောက်ပံပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ယောက်နှင့်အတူ ချေးငွေဌာနကို သွားရမယ်။ဒါ့ကြောင့် Lendmo Myanmar ချေးငွေရုံးမှာ apply လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လိုအပ်တဲ့စာရွက်တမ်းတွေကို online မှာ upload တင်လိုက်တယ်။ ချက်ချင်းပဲ ချေးငွေ လက်ခံရရှိလိုက်တယ်။ အရမ်းကိုပျော်တာပဲကွာ။.
Myo Win Aung - (Staff)
ကျွန်တော် ခရီးသွာစာအုပ်လိုချင်တယ် ဒါပေမယ့် ရံပုံငွေက မလောက်ငှဘူး။ Online မှာ ရှာကြည့်လိုက်တော့……အတိုးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ ချေးငွေကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Lendmo Myanmar ကို တွေ့ လိုက်တယ်။ဒါ့ကြောင့် Company website ထဲကို ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကို ချေးငွေရယူဖို့စွဲဆောင်နေတယ်။ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့ ကျွန်တော် ချေးငွေရယူလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာအုပ်လဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့။ ကျေးဇူးပါ Lendmo ရေ……
Stella - (Accounting manager) Investor
မြင့်မားတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ချေးငွေ ဝန်ဆောင်မူတွေကြောင့် Lendmo မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ကျွန်တော် ဝန်မလေးပါဘူး။ငွေးတိုးချေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အကျိုးအမြတ်များများ ဝင်လာတာကို ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ ပျော်လဲ ပျော်ရွှင်ပါတယ်။
Jack Paul - (Free trade)
Lendmo Investor Application က ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်အောင် ကူညီပေးတယ်။ ချေးငွေတောင်းခံလာတဲ့ တောင်းခံစာတွေကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီး ငွေချေးဖို့ ဘယ်သူက သင့်တော်တယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
Justin Joe - (Property Consultant) Investor
ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ရာ ငွေကြေး ကျွန်တော့်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တည်ငြိမ်တဲ့ ဝင်ငွေ စီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘယ်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး။ Lendmo မှာ ရင်းနှီးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။Lendmo က အရမ်းကို အကျိုးရှိပါတယ်။ အခုတော့ Lendmo မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရင်း အကျုးအမြတ်တွေ ပိုပြီးများလာဖို့ကျွန်တော် paln တွေ စဆွဲနေပါပြီ။
Application ကို Install ပြုလုပ်ပေးပါ။
Online မှာလဲ apply လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မိနစ် ၃၀ အတွင်း ချေးငွေရရှိပါမည်။
အနည်းဆုံး တစ်လကို အတိုးနှုန်း ၁.၅၀% ပေးချေရပါမည်။
Application ကို ယခုပဲ Install ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ပမာဏ အနည်းငယ်ချင်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Berita membicarakan Pinjam Cepat